अलविदा अरूणा! प्रेमीकाे टिप्परले ठक्कर दिएर मृ त्यु भएपछि प्रेमिका पनि रहेनन् यो पापी सँसारमा! – PathivaraOnline
Home > समाज > अलविदा अरूणा! प्रेमीकाे टिप्परले ठक्कर दिएर मृ त्यु भएपछि प्रेमिका पनि रहेनन् यो पापी सँसारमा!
सुर्खेत । सुर्खेतमा टिपरको ठ’क्क’रबाट केशरबहादुर सिंहको घटनास्थ’लमा नै मृ त्यु भएपछि विक्षिप्त बनेकी सिहकी प्रेमिकाले घट’नालगत्तै आत्मह त्या गरेकी छन् । घटना भएको स्थानमा केशर बहादुर सिह र उनकी प्रेमिका संगै रहेका बेला सिहको दुर्घ’टनामा मृ त्यु भएपछि विक्षिप्त भई कोठामा फर्किएकि कालिकोट घर भई सुर्खेतस्थित मामाघरमा बस्ने अरुणा शाहीले आत्मह त्या गरेकी हुन् । सिंहकाे निधनमा यसरी आत्मह त्या गर्ने अरूणा नेपालमै पहिलो पटक हो ।
अरुणाले केशरको घ’टना भएको केही बेरमा नै झु ण्डि एको अबस्थामा फेला परेकी हुन । केशरका आफन्तजनका अनुसार अरुणा मगलबार ३ बजे काठमाडौ जाने भएपछी बिहानै अरुणालाई भेट्न गएको जानकारी दिएका छ्न ।
कस्ताे थियाे प्रेम ?
अरुणा र केशर तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। केशरका आफन्त कमलकुमार सिंहका अनुसार उनीहरुबीचको प्रेम साथीभाइ र परिवारका केही सदस्यलाई पनि थाहा थियो । केशर र अरुणाले सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएका थिए । बिहेको लागि उपयुक्त समयको खोजीमा थिए उनीहरु । तर, आफ्नो प्रेमले मूर्त रुप नपाउँदै दुवैजना यो संसारबाट बिदा भएका भएका छन् । मंगलबार बिहान टिप्परले कि’चेर केशरको मृ’त्यु भएपछि प्रेमिका अरुणाले आ त्म ह त्या गरेकी छन् ।
दुर्घ’टनालगत्तै घटनास्थल पुगेकी अरुणाले केशरको क्षतविक्षत शरीर देखेकी थिइन् । आफ्नै खुट्टामा उभिएपछि मात्रै अरुणासँग बिहे गर्ने योजनामा थिए केशर । घरको जेठो छोरा भएका कारण आर्थिक भार थाम्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । रोजागारीको लागि उनी कालिकोटबाट सुर्खेत झरेका थिए ।
केशर सुर्खेत झरेपछि अरुणाले पनि सुर्खेत नै आउने निधो गरिन् । सुर्खेतमा बसेर दुवैजनाले कोरियन भाषाको तयारी गर्ने भए । दुवैजना एउटै इन्स्टिच्युटमा कोरियन भाषा पढ्दै थिए। मंगलबार एकैदिन उनीहरु संसारबाट विदा भएका छन् ।
गर्भवती हुँदा श्रीमानले गराए १० जनाबाट सामूहिक बलात्कार, श्रीमतीले सुनाइन् दर्दनाक कथा
शिशिर भण्डारी कार्टुनमा फालिएकाे बच्चाकाेमा पुगेर काख लिदै सहयोग गरे (भिडियो हेर्नुस)